Good Self Ukulinganisela Isithuthuthu Nge APP - Jomo Technology Co., Ltd
Good Self Ukulinganisela Isithuthuthu Nge APP
Kukho hoverboards ezininzi mvume apho phandle ezifumanekayo ezivenkileni, kwaye ukhetha ukuqinisekisa uya kuba mnye ngokukhuselekileyo ukuze ndikhwele wena okanye abantwana bakho. Ezi hoverboards ziyafumaneka kwi mveliso ezahlukeneyo ngokupheleleyo ngobukhulu ezahlukeneyo kunye nefomu ukwenzela ukuhlangabezana nemfuno mntu. Izithethi ngaphakathi Segway hoverboard ukuba ingavalelwa le carbon fible egubungele yangaphandle. Fumana kufuneka yakho hoverboard ngezithuthuthu zombane self-balancing emnyango yakho odolo ezivela ukhetho lethu elikhulu, Koowheel E1 mkhulu isithuthuthu yemveli zombane.
Okokuqala, kwaba Patent Innovative nendlela kuyilo opholileyo yi Koowheel.
Okwesibini, kufuneka Free APP ukuba abhale nokwabelana njalo uhambo lwakho, utshintshe useto.
Okwesithathu, LED isikrini kubonisa ngokupheleleyo ibhetri nesantya. Zonke ezi mpawu okuhle for kids kunye nabantu abadala. Le imveliso mhlawumbi ke hoverboards kakhulu ukuba ndakha ndafumana kwaye iza iimpawu ezimangalisayo eyenza kube efanelekileyo injongo yayo. Emva koko, siye ngokuhlalutywa hoverboards ukuba anikele izigqibo kakhulu ngempumelelo.
Uninzi hoverboards Mini Segway baye ngezantya ubunzima ezahlukeneyo. Ethetha isantya ziyahluka le hoverboard, lowo izisa isantya max ka-22km / h. Isenokuba mhlawumbi ukulayisha 80-100kg ubunzima kuyo. Zokuhamba Private ngoku iba mnandi ezongezelelweyo yaye ubhetyebhetye kunye nokuqaliswa ngezithuthuthu self balancing/ hoverboards . Yazi-kangakanani umhlobo iphambili abababulala ekuphuculeni ubomi ngayo kunye nokunika iinketho ezininzi ukuze ufumane kraca inkalo entsha elimiweyo inyathelo ngalinye.
Kule Self Ukulinganisela Scooters web site jikelele, siyifumene kwakhona ezi abathengisi leyo ukuba uthembeke kwaye zinika iibhodi eliphezulu. Le iifashoni ekhuselweyo ngalo mzuzu bayeza kufumaneka kwakhona kwi emarikeni. Shift ekhohlo okanye efanelekileyo ukujika, okanye shift emva ukulungisa. Scooters bekuthengiswe kwiipropati umntu othile ukusetyenziswa abantwana. Noko ke, ukususela iingcamango zam zobuqu, ezinye iinketho kunokuba luncedo ukuba ukuswela umntu, kodwa hayi zonke. Nayiphi na ngaphantsi koko, kunye nomthengi elusa - usenakho athambekele ukuthenga lemon. Update NEW: BALUMKELE ukuthenga ngendleko ephantsi wenza knockoffs Koowheel! Nangona ezinye ngezithuthuthu kuzama ukuqinisekisa ukhuseleko yakho ekunikezeni inkqubo balancing ngamawele, ungafuna ukuqinisekisa ukhuseleko kwakho ngakumbi. Ukuba uvakalelwa kukuba lweshishini lakho ayinakho ukuba ziyawa mihla, ukuze ngokulula utshintshe ukuba bathenge ambalwa self balancing ngezithuthuthu. Kusenokwenzeka kakuhle iikona ngesantya ngokugqithisileyo ngokwenene xa kuthe kwakho ifundiswe nje kuyinkalo kwicala.
ixesha Post: Nov-30-2017